State Counsellor receives Chairman of the Advisory Board for the Committee for Implementation of the Recommendations on Rakhine State and its members – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
During the meeting, the Chairman of the Advisory Board explained about the final report of the Advisory Board which has been submitted to the Committee for implementation as the Recommendations on Rakhine State today.
This was the fourth and last meeting between the State Counsellor and the Advisory Board since its inception. Dr. Surakiart has also presented the Final Report the Advisory Board to the State Counsellor.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့
(၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် H.E. Dr. Surakiart Sathirahai ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့အား ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ (၁၄၀၀) နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ H.E. Dr. Surakiart Sathirahai နှင့် အတူ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် (၅)ဦးတို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီသို့ ယင်း၏ အကြံပေးအဖွဲ့မှ ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက်တွင် တင်သွင်းခဲ့သော အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယခုတွေ့ဆုံမှုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အကြံပေး အဖွဲ့အနေဖြင့် စတင်ထူထောင်ပြီးချိန်မှစ၍ စတုတ္ထအကြိမ်နှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ Dr. Surakiart မှ အကြံပေးအဖွဲ့၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုသို့ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များအပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။